Chinetso chitsva chemitambo cheApple Watch chinotanga muna Ndira 2021 | Ndinobva mac
Chinetso chitsva chemitambo cheApple Watch chinotanga muna Ndira 2021
Imwe yemabhenefiti akakurisa eApple Watch kugona kusangana nematambudziko ayo airi kutikurudzira. Mwedzi wega wega isu tine mukana wekuzadzisa zvinangwa zvepamwedzi zvatinotaridzirwa newachi sechikamu chechirongwa chekukurudzira kuti tigare takasimba. Mwedzi uno, semuenzaniso, isu tinofanirwa kuwedzera zvakapetwa koriori kanomwe. Nguva nenguva matambudziko akasarudzika anobuda uye isu tatozivisa izvo Dambudziko rekutanga remitambo yeApple Watch rinotanga muna Ndira 2021.
Apple inogara ichiisa nhevedzano yematambudziko kusangana paApple Watch. Mwedzi wega wega tinofanirwa kusangana nedambudziko uye nguva nenguva kambani inotanga yakakosha. Tine dambudziko rezuva repasi kana Zuva reVeterans. Dambudziko rekutanga remitambo reApple Watch rinotanga muna Ndira 2021. Dambudziko rakakosha kunze kweiro rinoitika mwedzi wega wega. Ino nguva tinokurudzirwa nekuita uvhare mhete nhatu, mazuva manomwe akateedzana. Icho chinonzi kuita vhiki yakakwana.
Vhiki iro tinozviita, isu tine kubva musi wa7 kusvika musi wa22 Ndira, kukwanisa kuzviwana. Vhiki iro, tichawana matambudziko akawanda. Kwete chete yakakosha, asi iro rakakwana vhiki uye kubudirira kwega kwega ringi iro rekupedzisira zuva. Uye zvakare, Apple ichatipa zvitambi zvekushandisa muMessage uye FaceTime. Zvakwana kufadza chero munhu uyezve kutanga gore mushe. Zvinotendwa kuti vatibvumire kutanga musi wechinomwe, kuti tikwanise kunakirwa nechidimbu che roscón de reyes pasina matambudziko.
Tichamirira chiziviso icho Apple chinowanzo tumira kune vashandisi veApple Watch, mazuva mashoma nyevero yezuva iro dambudziko ratanga. Ramba wakarongedzwa uye isu tichaenda kutanga gore nemitengo yakati wandei uye needu fomu mune yakakwana mamiriro ekudzokorora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Chinetso chitsva chemitambo cheApple Watch chinotanga muna Ndira 2021
Nhengo Dzinokosha Dzinokosha muApp Fair Coalition
Meross ine zvigadzirwa zvakawanda nemitengo yakanaka yemushandisi weKeKit